DAREERAYAASHA LO'DA (LO'DA) SAMEE ADIGU: TALAABO TALAABO TALAABO AH, SAWIRO, VIDEO - XOOLAHA
Sida loo sameeyo khamri-cabbaha si ay gacmahooda u yeeshaan
Dareerayaasha lo'da (lo'da) waxay door muhiim ah ka ciyaaraan shaqada buuxda ee beeraha gaarka loo leeyahay. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in biyaha aan la kala qaybin ee biyaha la cabbo ay si toos ah u saameynayaan tayada hilibka lo'da iyo caanaha lo'da. Qalabka cabitaanka waxaa laga iibsan karaa goobo khaas ah ama isku day inaad naftaada dhisto, adoo raacaya xeerarka fudud ee hoos ku qoran.
Shuruudaha guud ee biyaha la cabbo ee lo'da
Si loo dhiso habdhismeedka cabitaanka, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo da'da iyo qiyaastii heerka isticmaalka biyaha ee lo'da kasta. Marka hore, jihada wax soo saarka ayaa la tixgeliyaa.
Caanaha-caanaha iyo shakhsiyaadka caanaha xilliga nuujinta waxay diyaariyaan weelasha cabitaanka oo ay ku jiraan 150 litir oo cabitaan ah, oo ku salaysan nidaam sahlan: in ka badan 4 litir oo biyo ah ayaa looga baahan yahay inay soo saaraan 1 litir oo caano ah.
Xayawaanka hilibka, dhalinyarada iyo daan-beebka, heerka biyaha waxaa loo xisaabiyaa si kala duwan:
Caloolaha laga bilaabo dhalashada ilaa lix bilood waxay u baahan yihiin 15-20 litir oo biyo ah maalintii. Iyadoo lagu saleynayo noocyadan da'da, beeralayda waa in ay bixiyaan dareenka ugu badan ee tayada iyo heerkulka dareeraha la bixiyo, iyo sidoo kale xoogga qalabka cabbitaanka;
Awoodaha loogu talagalay quudinta digaaga lix bilood illaa sanad ayaa ah inay ku jiraan ugu yaraan 30 litir oo biyo nadiif ah qofkiiba. Waa qadarkan oo u fiicnaanaya horumarka buuxa ee xayawaanka yaryar ee weli liita;
Chicks Nervolzhavshim iyo cows dhalinyarada ku habboon cabitaanka leh 40 ilaa 50 litir. (Qaybta 1 sano iyo ka weyn);
Qiyaasta maalinlaha ah ee dareeraha saafiga ah ee lo'da iyo duufiyeyaasha waxsoosaarku waa 60-70 litir.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro nolosheeda, lo'da ayaa awood u leh inay bixiso qiyaastii 200 kun oo koob oo caano ah. Kaliya 60 sac ayaa soo saari kara tone caano ah 1 maalin. Laakiin rikoodhka dunida ee waxsoosaarka caanaha ayaa iska leh lo'da Cuban - kaliya 365 maalmood, waxay siisay 27.672 litir oo badeeco caafimaad ah.
Guud ahaan waxaa jira 2 nooc cabitaan - shakhsi (oo lagu xisaabiyay hal xayawaan) iyo koox (dhammaan daaqada).
La isku habeeyey
Naqshadaha tooska ah ee shakhsi ahaaneed, sida caadiga ah, ayaa si madax-banaan loo sameeyey - waxay si weyn u kaydisaa kharashyada dhaqaale. Ujeeddadooda ugu weyni waxay tahay quudinta shakhsi kasta ee lo'da, taas oo inta badan ku bixisa xididada, xoqan.
Kooxaha khamriga ah waxay ku haboon yihiin qaansiiro lacag la'aan ah. Waxay awoodaan inay biyo nadiif ah u siiyaan dhawr qofood mar. Qalabku ma aha oo kaliya taariikhi, laakiin sidoo kale waa mobile. Dabadeed waxa loo isticmaalaa habka socodka (daaqa) xoolaha.
Baro sida loo beerayo lo'da daaqsinka.
Qeybinta cabbitaanka khamriga ee tooska ah ee lo'da soo saaraha
Maanta, suuq beeraleyku wuxuu bixiyaa noocyo badan oo ka mid ah noocyada khamriga ee kala duwan oo ku habboon isticmaalka muddada-dheer ee wax-soo-saarka xoolaha ee waaweyn iyo beeraha yaryar ee gaarka loo leeyahay.
Nooc kastaa wuxuu ku haboon yahay qaabkiisa, laakiin ugu caansan iyo waxtarkaba waa caleemaha, muraayadda iyo nooca lakabka, oo ay soo saaraan kuwa soo saara beeraha si fiican loo yaqaan: USS AGRO, AiS AGRO, Agropromtekhnika LLC.
Baro sida loo dhiso barn.
Ka hor inta aan la isticmaalin liis gareyn ah oo gaar ah, beeraley cusub ayaa isku dayi kara waxyaabo kale oo caan ah oo caqli-gal ah, tusaale ahaan: xarig baaldi la shaqaaleeyo, birta lagu qubeysto ama weel dhuxul leh. Taangiyada noocan oo kale ah waa mid aad u sahlan in lagu rakibo, aan raqiis ahaynna ma bixin wax soo saarka madaxbannaan.
Si kastaba ha noqotee, qalabkani wuxuu leeyahay dhowr dhibcood oo waaweyn:
la'aanta kuleylka xilliga qaboobaha;
Waxaa loo baahan yahay gacanta iyo waqtiba si biyaha loogu daro xayawaanka.
VIDEO: iibso cabitaan loogu talagalay lo'da
Si biyuhu si siman u galaan qalabka shakhsi ahaaneed ama kooxaha, waxay ku xiran tahay nidaamka nadiifinta nooca dareeraha ee dareeraha ah:
Mabda'a shaqada ee nidaamka daboolka waxaa lagu barbar dhigi karaa shaqada musqusha. Foosto ayaa lagu rakibay taangiga dhexe ee biyaha la isku haysto, taas oo xukuntay heerka saxda ah ee biyaha. Laga soo bilaabo tuubooyinka taangiyada dhexe ayaa taga tuubooyin kale oo cabitaan ah. Inta lagu jiro habka isticmaalka biyaha, heerkeedu wuxuu yareeyaa taangiga, taas oo keenaysa in la gooyo shaydada iyo dib-u-cusbooneysiinta biyaha ee tuubada cabitaanka khamriga;
Nidaamka valf wuxuu kaloo u baahan yahay xiriirka biyaha. Farqiga ayaa ku jira xaqiiqada ah in qaansarradu naftooda u qoondeeyaan heerka biyaha iyadoo la riixaayo furaha khaaska ah marka la cabayo qandhada.
Waa muhiim! Beeralay badan oo badani kuma talinayaan isticmaalka habka hawo qaadashada sababtoo ah dhaawacyo soo noqnoqonaya qalabka xayawaanka ee cabitaanka khamriga, taas oo horseedda qiimaha dayactirka iyo dib u dhiska.
Cabitaanada for bullasha iyo lo'daada ayaa sameeya: video
Cabbitaanka khamriga waxaa loo habeeyay si la mid ah sida kan gaduudan. Waxaa lagu hagaajiyaa qiyaasta loo baahan yahay dareeraha ee baaquli. Marka hoos loo dhigo baaquli, guluubka ayaa dhaqdhaqaaqa oo gebi ahaanba jebiya socodka biyaha.
Maadaama ay hoos u dhacdo, dib u habeyn ciriiri ah ayaa kor u qaadaya qaybta la dhaqdhaqaaqi karo oo ay weheliso galka sawirada, iyo biyaha ayaa si tartiib ah u buuxinaya baaquli. Ka dib marka nidaamka la rakibo, lo'duna waa in si gaar ah loo tababbaray in ay biyaha ka cabbaan saxarada.
Soo ogow sababta kubbadu u caajis tahay oo si xun u cunta, waxa fiitamiinada siinaya weylaha, sida loo daaweeyo shubanka ee weylaha.
Alaabta ibta ayaa loo isticmaalaa in lagu quudiyo ubaxa dhallinyarada. Kulanka waxaa ka mid ah jirka birta, nipple valve iyo seal gaar ah. Meelaha sare waxaa jira nidaam isku xiraya tubbada biyaha.
Faa'iidada naas nuujiyeyaasha waa in ay yihiin nadiif, waxay u baahan yihiin dayactir yar oo ay ku kalsoon yihiin hawlgalka, marka la barbardhigo qalabka ama qalabka koobabka. Khasaarada ayaa ah in aysan suurtagal ahayn in aad naaska ibta naftaada ka sameysid; beeralay badan ayaa horay u soo iibsaday foomka dhameystiran.
Nidaamka iskiis u shaqeysta wuxuu ku habboon yahay midka ugu cimri dheer iyo amaanka xoolaha. Si aad u gaarto go'aanka saxda ah oo aad go'aansato, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhammaan khayraadka iyo khasaaraha mid kasta:
biraha (galvanized birta ama birta aan lahayn). Cabbirayaasha biraha waa kuwo xoog leh, si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo saameyn, waxaa laga yaabaa inay waxoogaa u muuqdaan. Dhismaha birta si fudud ayaa loo maydhi karaa loona nadiifiyaa;
geedka - Qalabka bey'adda leh ee la isku halleyn karo oo la isku hallayn karo oo loo isticmaalo cabitaanka kaliya ka dib nadiifinta nadiifinta iyo daboolida walax aan waligeed lahayn. Isticmaal aad u dheer, alwaax ma aha mid ku habboon - si tartiib tartiib ah, qalabku wuxuu nadiifin karaa oo dabooli karaa caaryada;
caag ah ma aha oo keliya faa'iido badan, laakiin sidoo kale kuwa ugu caansan iyo waxqabadka beeralayda badan. Waxyaabaha u adeega wakhti dheer oo si fiican loo nadiifiyaa haddii loo baahdo;
dhismaha lebbiska, sida caag ah, oo ku habboon isticmaalka muddada dheer, laakiin kaddib marka la nadiifiyo oo la nadiifiyo gudaha.
Sidee loo sameeyaa heerarka qaansarada leh gacmahooda
Wax soo saarka madax-bannaan ee cabbitaanka khamriga ayaa kaa caawin doona oo keliya inaadan badbaadin miisaaniyadda, laakiin sidoo kale qalabka wax lagu qalajiyo sida waafaqsan baahiyaha milkiilaha, beerta iyo lo'da.
Baro naftaada cudurada faafa ee lo'da, cudurada hoofyada ee lo'da.
Naqshadeynta iyo cabbirrada
Nidaamka samaynta nidaamka cabitaanka laftiisa ma aha mid adag haddii beeralaygu barto sifooyinka qaababka iyo mabaadii'da aasaasiga ah ee hawlgalka. Fikradda aasaasiga ah waa in la dhiso hannaan gaar ah oo leh nidaam biyo xiran oo la isku hagaajiyay, kaas oo xakameynaya jiritaanka dareeraha iyo heerarkiisa dhammaan weelasha cabitaanka. Sidaas darteed, dheecaanku wuxuu dhex marayaa marinka qoryaha, dhoobada ama qashinka.
Saamaynta ugu fiicani ee qaansiirka qaangaarka ah waa 2255х700х1010, mugga - 140 litir. Miisaanka - ilaa 150 kg. Dhererka way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran nooca da'da xayawaanka (1500mm-2000mm).
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la tixgeliyo qodobadaas:
dhinaca sare ee weelka cabitaanka waa in uu ahaadaa ugu yaraan 8 sm ka fog dabaqa si aysan xayawaanku u taaban cidhifyada hoose ee dhuunta oo aan qoortooda qafiifin inta ay cabbayaan;
iyada oo qaabka guryaha dabacsan, taangiga biyaha waa in uu ku yaal meel aan ka badnayn 15 mitir ee feederiyaha;
sidaa daraadeed in lo'du aanay ku soo ururin khadka adag ee u dhow kuwa cabaya, waa in la dhigaa meelo kala duwan oo qashinka ah oo loogu talagalay xisaabinta - 25 shakhsi kasta oo weel ah oo buuxa oo ah 15 litir daqiiqaddii.
Ma taqaanaa? Sawirka lo'da waxaa laga arki karaa calaamadaha gobolka ee Andorra, Nepal iyo waddamo kale. Hindiya, xayawaanku waa mid xurmo leh oo calaamad u ah barwaaqada, badi baaxad leh iyo xayawaanka xoolaha. Buugga Hurriyaanka Hurrian, Ilaah qorraxdu wuxuu ku socday laba sacadood - Ururi (subax) iyo Surry (fiidkii).
Sida loo rakibo autodrinkers ee barnadda: video
Qalabka weelasha cabitaanka waa in lagu xushaa iyada oo ku saleysan xajmiga barnaanta, tirada xoolaha iyo mudnaanta shakhsi ahaaneed.
Sida kor ku xusan, waxay noqon kartaa:
Baro sida loo sameeyo hawo qaboojiyaha.
Qalabka loo baahan yahay in la isku keeno qaab dhismeedka cabitaanka:
Talaabooyinka wax soo saar
Waraaqda cabitaanka birta:
Weld ama kabo sanduuq birqar oo dheer;
Dhamaadka ugu dambeeya, waxaad gelisaa qasabadda ama darbiga derbiga ah (si aad u daadisid biyaha haray).
Waa muhiim! Si aad u sameyso darbiga derbiyada sida ugu macquulsan uguna daboolan, shaanbada caagga ah waxaa loo isticmaalaa habka wax soo saarka.
Laga soo bilaabo guddiyada qoryaha:
Dhisida xaddiga lagama maarmaanka kartida kartida;
Ka dabool qaybaha kala duwan ee rinjiga;
Laga soo bilaabo caaga:
Si aad u iibsato qaybta caagagga ah ee qaybta laymanka (laga bilaabo 30 cm);
Ku rid taangiga "lugaha".
Laga soo bilaabo lebbiska:
Ka bixi kartida kartida lebiska;
Dheji gudaha iyo dhinacyada wax aan sun lahayn.
Laga soo bilaabo silsilad gaas:
Ku dhaq, qallalan oo hawo galka gaasta (100 litir) si buuxda hawada;
Samee 4 god oo ku jira boodhadhka: qulqulka biyaha, tuubada biyaha, biyaha daadinta biyaha iyo gabbaldhaca;
Ku rakib tuubo boor leh shukumaan.
Autodrink for lo'da ku samee-naftaada: video
Sidee u kariyaa kuleyliyaha
Si looga hortago horumarinta hargabka ee lo'da ee lo'da, kuleyliyeyaasha kuleylka waa in la hor dhejiyo qaboojiyaha cabitaanka, kuwaas oo si joogto ah u ilaalin doona heerkulka biyaha ee la cunay heerkulka loo baahan yahay (12-20 ° C). Sida caadiga ah, beeralayda waxay isticmaalaan labo nooc oo kuleyl ah: shakhsi ama caadi.
Shakhsiyaadka (kuleyliyaha korontada ku shaqeeyaa) waa kuwo waxtarka leh oo fudud, laakiin waxay ku kacayaan lacag badan. Guud ahaan (rakibidda kuleylka dhexe) waxay ku haboon yihiin beeraha leh nidaamyada waraabinta nadiifinta. Marka kuleylka dhexe uu ku xiran yahay, biyaha taangiga waxaa la siinayaa horay diiran, taas oo si buuxda u xallisa dhibaatada kululaynta waqtigeeda.
Ma taqaanaa? Dhawaan ayaa Belarus wuxuu bilaabay inuu ka dhigo cabitaanka cuntada ee polyetylen ee cadaadis hooseeya, iyada oo mugga dareeraha laga bilaabo 90 ilaa 290 litir. Biyaha ku jira ma awoodi karaan inay xakameeyaan xitaa haddii ay qaboobaan daran, tan ugu hooseysa taangiyadan ayaa si madax-bannaan u ah.
Sida loo dhiso barxadda aan xalaasha lahayn ee barnka: video Qaadashada maaddooyinka lagama maarmaanka ah, rabitaanka iyo dulqaadka oo saldhig u ah, waxaa suurtagal ah in la sameeyo qaanado cabitaan oo tayo leh oo loogu talagalay inay yeeshaan lo'dooda gudaha, iyaga oo u adeegsanaya ugu yaraan dadaal dhaqameed iyo lacag ah.
Cabbiraha kooxda wuu fiicanyahay, laakiin waxa uu leeyahay hal dhibic: waxa uu noqonayaa mid isku xoqay cunto. Haddii ay tuubooyinka jirriddu aysan ku dhaafin xarriiqyada khamriga, laakiin waxay ku xiran yihiin tuubooyin, ka dibna guud ahaan waa xun. Haddii aad rabto inaad sameyso nooca khamriga ah, qaado diyaargarow. qiyaastii 250, dhererka u dhigma dhererka dhererka xajmiga, samee tirada daruuriga ah ee laga goynayo ee lo'da si loo helo biyaha. Hal dhinac, ku xir qaybta sare ee taangiga wax soo saarka, iyo kan kale, ka soo jiid tuubka soo noqoshada 2 "qaybta hoose" Meelka wax lagu xiro, waxaad dhigataa qalabka kuleylka (korontada ku xiran tahay tirada madaxyada), kaas oo soo jeedin doona marxaladda ku habboon qaabka la rabo. kululaynta Biyaha ku jira haan bixinta iyada oo loo marayo xirmadda heerkulka.